राजनीति - Rastriya Samachar
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको ठहर गरेको छन् । राप्रपाले निर्वाचन आयोगको पत्रको सम्बन्धमा कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने...
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगले राप्रपा पार्टीको विधानबाट राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने शव्द हटाउ भन्नु नै गैरसंवैधानिक भएको बताएको छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिलाई जनताको सेवाका रुपमा लिनुपर्ने र यसलाई पेशा व्यापार बनाउँन नहुने बताएका छन् । झापाको सुरुङ्गामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई...
हेटौंडा । राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले महाधिवेशनमा भएको पराजयलाई स्वीकार नगरी राजसंस्थालाई दोषारोपण गरिरहेकोमा उनकै गृहजिल्ला मकवानपुरमा असन्तुष्टि बढेको छ। राप्रपाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरु, पूर्वजिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश सदस्यहरु, जिल्लाका पदाधिकारीलगायत...
कैलाली । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ठूला राजनीतिक दलले देश लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाएको बताएका छन् । बिहीबार धनगढीमा राप्रपाका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले ठूला राजनीतिक...
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा ३१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गरेका छन्। मंगलबार लिङ्देनले ३१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका हुन्। राप्रपामा पदाधिकारीसहित १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था...
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देश र धर्म संकटमा परिरहेको अवस्थामा आम जनताको राप्रपा प्रति नयाँ आशा, विश्वास र भरोसा पैदा भएको बताएका छन् । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा...
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रबीच पार्टी एकताबारे छलफल
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, महामन्त्री धवलशमशेर राणा र विकेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रबीच पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको छ। शुक्रबार मिश्रको निवास पुगेका लिङ्देन र राणाले मिश्रसँग...
नेपालका राजाहरु विदेशी सामु झुकेनन् : राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन
१४ पौष, काठमाडौ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विदेशीको सामु झुक्नु भन्दा नेपाली जनताको चाहना अनुरुप चल्ने नेपालको राजसंस्थाको विशेषता रहेको बताएका छन् । स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको ७७ औं जन्म...
राजालाई गाली गरेर राजनीति गर्ने दिन गए- राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन
१२ पौष, नवलपुर । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विगत १५ वर्षको गलत राजनीतिक अभ्यासका कारण देशको राजनीति लिक बाहिर गएकाले पुनः लिकमा हिडाउन जरुरी भएको बताएका छन् । राप्रपाको आज...
७७ जिल्ला समितिलाई राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको सर्कुलर : खादा, मालाको तामझाम नगर्नु
काठमाडौं । केही दिन अघि दाङमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकमा २५ केजीको फुलको माला अस्विकार गरेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले काठमाडौं आउनासाथ माला, खादा लगायतका तामझाम नगर्न ७७...
सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु : सभापति देउवा
काठमाडौं, पुस १० गते । प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने बताउनुभएको छ । ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवनमा १४ औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई...
आन्दोलनबाटै हिन्दुराज्य र राजसंस्थाः अध्यक्ष लिङ्देन
शरद रेग्मी दाङ ८ पुस । राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिंग्देनले राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राज्य आन्दोलनबाटै स्थापित हुने बताउनुभएको छ । रिपोटर्श क्लव दाङले विहिवार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको...
राजसंस्था र जनताबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्र प्रमुखको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था र जनताले प्रत्यक्ष चुनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री देशका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार दाङको तुलसीपुरमा राप्रपा...
राप्रपाको प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठक आजदेखि
राप्रपाको महाधिवेशनको लगत्तै बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार आजदेखि प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठक शुरु हुँदैछ । पार्टीको महाधिवेशनले तय गरेको राजनीतिक कार्यदिशाबारे अगुवा कार्यकर्तालाई जानकारी गराउने, संगठन...
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र अमेरिकन राजदुतावासका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र अमेरिकन राजदुतावासका प्रतिनिधि मार्क ट्याम्लरबीच भेटवार्ता भएको छ । बुधबार राप्रपा केन्द्रिय कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष लिङ्देन र अमेरिकन राजदुतावासका राजनीतिक र आर्थिक उप-काउन्सिलर...
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन पुष ८ मा दाङ तुल्सिपुर जादैँ, राप्रपा प्रवेश गर्न चाहनेलाई खुल्ला आव्हान
काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन यहीँ पुष ८ गते दाङको विपि चौक तुल्सिपुर जाने भएका छन् । राप्रपा लुम्बिनी प्रदेशको बिस्तारित बैठकको उदघाट्न समारोहमा हुने आमसभा कार्यक्रममा सहभागी हुन...
तीन दिनमा झापाका १३५६ जना राप्रपामा प्रवेश
झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृह जिल्ला झापा १ हजार ३ सय ५६ जनालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएका छन्। अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला झापा...
ओलीको चुनाव क्षेत्रमा लिङ्देनको प्रभाव, ७ सयभन्दा बढी राप्रपामा प्रवेश
झापा । राप्रपाका अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन निर्वाचित भएसँगै राप्रपामा प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन झापा गएको केही दिनमै झण्डै ७०० भन्दा धेरैले राप्रपामा प्रवेश गरेका...
झापामा एकैदिनमा ४५६ जना राप्रपामा प्रवेश
झापा । पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला झापा आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले झापामा एकै दिन ४ सय ५६ जनालाई आफ्नो पार्टीका प्रवेश गराएका छन्। शनिवार...
कांग्रेस महाधिवेशन: ३५ सय मतगणना हुँदा ‘टप’ ३५ मा कसको मत कति ?
काठमाडौं, पुस ४ गते । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यको खुलातर्फको ३५ पदका लागि ९९ जनाबीच भएको प्रतिस्पर्धामा मतगणना जारी छ । आइतबार साँझ...
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई झापामा सम्मान
झापा । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई गृह जिल्ला झापामा सम्मान गरिएको छ। राप्रपा झापा जिल्ला समितिले केन्द्रीय अध्यक्ष लिङ्देनलाई सम्मान गरेको हो। राप्रपाका झापा अध्यक्ष केशव ओझाले सम्मान पत्र प्रदान...
गगन थापा काँग्रेस महामन्त्रीमा विजयी
काठमाडौं, १ पौष । नेपाली काँग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा विजयी भएका छन् । ४ हजार मत गन्दा उनले २५८१ मत कटाएका छन् । अब ७ सय मत गन्न बाँकी छ...
काठमाडौं, मङ्सिर २९ गते । नेपाली काँग्रेसको सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ । मङ्सिर २४ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी १४ औँ महाधिवेशनबाट सभापति पदमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको देउवा...
देउवालाई विमलेन्द्र निधिकाे पनि समर्थन
काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेस सभापति पदको दोस्रो चरणको मतदानमा नेता विमलेन्द्र निधिले पनि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले प्रधानमन्त्री देउवालाई निधिले पनि...
हामीलाई विभाजित हुने छुट छैन : दीपक बाेहरा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता दीपक बोहराले आफुहरुलाई बिभाजित हुने छुट नभएको बताएका छन् । एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका पदाधिकारीलाई आइतबार शुभकामना दिदै नेता बोहराले एकताबद्ध...
काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपमा हुनुहुन्छ । उहाँ आज बिहानदेखि भृकुटीमण्डपमा रहेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया र परामर्शमा व्यस्त...
कांग्रेसमा १३४ पदमा ५४८ उम्मेदवार दर्ता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि शनिबारबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ । शनिबार १३४ पदका लागि ५४८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जनतामा नेताप्रति बिश्वास नरहेको टिप्पणी गरेका छन । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले नेताहरुप्रति जनताको...
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले सह–महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता विश्वकर्माले दलित...
राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेरको नेतृत्वमा समान विचार भएका पार्टीहरूसँग एकता गर्न समिति गठन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समान विचार भएका पार्टी तथा समूहहरूसँग एकता प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । एकता महाधिवेशनपछि पार्टीको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकले समान विचार भएकाहरूसँग...
राप्रपा पहिलो बैठक: समान विचार भएकासित एकता गर्ने, सबै तहमा बैठक राखी चलायमान हुन निर्देशन
काठमाडौं । राप्रपाको एकता महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठकले समान विचारधारा भएका व्यक्ति ,समूह, संस्था, संगठन, पार्टी र धार्मिक क्षेत्रसँग एकता र सहकार्य गर्ने भएको छ । आज पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय धुम्बाराहीमा...
नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीद्धारा एमसीसी खारेज गर्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं । कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीले एमसीसी खारेज गर्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजवादीले राष्ट्रघाती...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले आज धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका हुन्। उनले आफू महामन्त्री हुँदा प्रयोग गर्ने गरेको...
काठमाडौं । राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आज पदभार ग्रहण गर्ने भएका छन् । आज सोमबार बिहान ११:५४ बजे राप्रपाको केन्द्रिय कार्यालयमा लिङ्देनले अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्न लागेका हुन् । गत...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले निर्वाचन परिणम सवैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार सकिएको मतगणनाले राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।...
काठमाडौं । राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापालाई हराउँदै युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देन विजयी भएका छन् । आइतबार बिहान सम्पन्न मतपरिणामबाट थापालाई १७१ बढी मतले हराउँदै लिङ्देन विजयी भएका हुन् । पार्टीको...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्वका लागि आज बिहान ८ बजे तय भएको मतदान ढिलो सुरु भएको छ । निर्वाचन अधिकृत राजु बस्नेतले उम्मेदवारको नाम रुजुको काम भइरहेकाले मतदानमा...
राप्रपाकाे नयाँ नेतृत्वका लागि आज चुनाव, लिङ्देनको पल्ला भारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकाे नयाँ नेतृत्वका लागि आज शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । भृकुटीमण्डपमा जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री र १४१ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि बिहान ८ बजेदेखि...
राप्रपा महाधिवेशन : उपाध्यक्षका उम्मेदवार विक्रम पाण्डेको समर्थन लिङ्देन समुहलाई
काठमाडौं । राप्रपाको एकता महाधिवेशन गत बुधबारबाट काठमाडौंमा जारी छ । शुक्रबार मनोनयन दर्ता गरिएको छ । कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन समूह नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा छ । दुवै समूहले वरिष्ठ...
राप्रपाको अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङ्देनको उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । शुक्रबार लिङ्देन सहितका नेता–कार्यकर्ता बाजागाजासहित राष्ट्रियसभागृहमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्न पुगेका हुन् । राप्रपाको नेतृत्वका लागि कमल...
कमल थापा पक्षले फर्जी प्रतिनिधि थपेको लिङदेन पक्षको आरोप, निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाममा विवाद भएपछि निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । बिहीबार विहान १० बजे नै निर्वाचन कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यतालिका भए पनि प्रतिनिधिको नाममा...
राजेन्द्र लिङ्देनले टुंग्याए पदाधिकारी टिम, महामन्त्रीमा धवल शम्शेर
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचनबाट चयन हुने उपाध्यक्ष र महामन्त्रीको उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् । उनको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा बिक्रम पाण्डे, दिलविकास राजभण्डारी, रामचन्द्र...
काठमाडौं। राप्रपा पार्टीको महामन्त्रीमा अभिनेत्री रेखा थापाले उम्मेदवारी दिने भएकी छन। राप्रपा अध्यक्षका आकांक्षी राजेन्द्र लिङ्देनको प्यानलबाट उनले महामन्त्रीका लागि आज मनोनयन दर्ता गर्ने भएकी हुन। राप्रपामा तीन महामन्त्री पदको...
यही कार्यशैलीले राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्न सक्दैन: राजेन्द्र लिङ्देन
काठमाडौं । राप्रपाका नेता तथा आगामी कार्यकालबाट नयाँ नेतृत्वका दाबेदार रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान नेतृत्व र कार्यशैलीबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘जसोतसो जोडजाड गरेर तीन...
काठमाडौं । नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले २००७ सालयता मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप भित्रिएको बताएका छन् । भृकुटीमण्डपमा जारी राप्रपाको एकताको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले २००७ सालबाट सुरु भएको...
लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि युवाको पक्षमा, लिङ्देनलाई सहयोग गर्न थापालाई आग्रह
काठमाडौं, १५ मंसिर । राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राप्रपाको नेतृत्व अब युवापुस्तालाई दिनु उचित हुने आशय व्यक्त गरेका छन् । भृकुटीमण्डपमा जारी राप्रपाको एकताको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई...
काठमाडौं, १५ मंसिर । राप्रपाका महामन्त्री तथा अध्यक्ष पद उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान नेतृत्वले पार्टीकै अस्तित्व संकटमा पारेको आरोप लगाएका छन् । भृकुटीमण्डपमा भइरहेको राप्रपाको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन...
नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिनुस् : डा.लोहनी
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिन आग्रह गरेका छन् । डा. लोहनीले दुई अध्यक्षलाई नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिन आग्रह गरेका हुन्...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन गर्ने भएका छन् । मंसिर १५ देखि हुने महाधिवेशनको लागि डा. लोहनीले लिङ्देनलाई समर्थन गरेका हुन् । नयाँ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मंसिर १५ देखि काठमाडौंमा हुने पार्टीको महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा...
काठमाडौं । हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठायौं । तर औपचारिक रूपमा कसले नेतृत्व गर्नेछ ? अध्यक्ष को हुने ? यिनीहरूको कुरा मात्रै हो कि साँच्चै...
काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार ४० भन्दा बढी जिल्लामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ । निर्वाचन समितिका सचिव तथा अधिवक्ता जगन्नाथ श्रेष्ठले दुई वटाभन्दा बढी निर्वाचन...
काठमाडौं । राप्रपाको मंसिर १५ देखि १७ गतेसम्म हुने महाधिवेशनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं ९ अन्तर्गतको प्रदेश सभा 'ख´मा २० वर्षीय युवा निशान कार्की महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।...
काठमाडौं । राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । नेपालगञ्जका मेयरसमेत रहेका नेता धवलशम्शेर राणाको समर्थनमा लिङ्देनले बिहीबार अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।...
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत देशभरबाट तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । महाधिवेशन सुरु हुन दुई साता अघिसम्म तीन हजार ५१० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि...
काठमाडौं । राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । नेता धवलशम्शेर राणाको समर्थन पाउने टुंगो लागेपछि लिङ्देनले बिहीबार अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने भएका हुन् । राप्रपामा...
काठमाडौं । आजदेखि राप्रपाको महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन शुरु हुँदैछ । मंसिर १५-१७ गतेसम्म काठमाडौंमा राप्रपाको महाधिवेशन आयोजना गरिएको छ । महाधिवेशनका लागि देशका ३३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट २९७०...
महाधिवेशन अगाडि नै विधानको बारे व्यापक छलफल होस् : राप्रपा नेता रिमाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता प्रकाश रिमालले राप्रपाको आगामी एकता महाअधिबेशन अगाडि नै पार्टीको बिधानको विषयमा व्यापक छलफल हुनु पर्ने माग गर्नु भएको छ । आज सामाजिक संजाल...
राप्रपाको प्रदेश अधिवेशनहरु सम्पन्न, सबै प्रदेशको परिणाम प्राप्त
काठमाडौं । राप्रपाको आइतबार सातवटै प्रदेशको एकैसाथ शुरु भएको प्रदेश अधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ । केही प्रदेशमा सर्वसम्मत र केही प्रदेशमा मतदानबाट परिणाम आएको छ । एक प्रदेश नम्बरमा...
राप्रपाको प्रदेश अधिवेशनहरु सम्पन्न, ६ वटाको परिणाम प्राप्त
राप्रपा युवा संगठनले भन्यो, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्नु जनविरोधीे कार्य”
काठमाडौं । राप्रपा निकट युवा संगठनले वर्तमान परमादेशवाट गठित देउवा नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेर जनविरोधीे कार्य गरेको बताएको छ । संगठले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्ने जनविरोधीे...